18 | Oct | 2021 | SAVE OUR COUNTRY | SAVE MYANMAR | RESPECT OUR VOTES | HONOR ELECTION RESULTS
စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် ချင်းတော်လှန်ရေးတပ်များ တစ်ရက်အတွင်း ၂ ကြိမ် တိုက်ပွဲဖြစ် စစ်ကောင်စီတပ်အထိနာဟုဆို
ချင်းပြည်နယ် ဟားခါးလမ်းမကြီးပေါ်တွင် ချင်းတော်လှန်ရေးတပ်များနှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ ယနေ့ တွင် တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ထလန်ရော် Thlanrawn ကျေးရွာနှင့် တာလ် Tal ကျေးရွာအကြားတွင် ချင်း အမျိုးသားတပ်မတော် CNA နှင့် ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တို့ CDF တို့ပူးပေါင်းတပ်က စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် နံနက် ၁ နာရီထိုးက တစ်ကြိမ်နှင့် နံနက် ၁၁ နာရီထိုးက တစ်ကြိမ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကာ နှစ်ကြိမ်လုံးတွင် စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က ကျဆုံးမှုများရှိသည်ဟု ချင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကပြောသည်။
“ မနက်က တိုက်ပွဲဖြစ်တော့ စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေ တောထဲတောင်ထဲ ကစင့်ကလျား အကုန် ထွက်ပြေးကြတယ်။ နောက်ပြီး သူတို့ကလူစုပြီး ဖလမ်းဖက် ဆုတ်လာတဲ့အချိန်မှာ ဒီဘက်ကစောင့်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ ဝင်တွေကတိုက်ကြတာ ” ဟု CNA ပြောခွင့်ရ ဆလိုင်း ထက်နီမှ ပြောသည်။
ပထမတိုက်ပွဲတွင် ထလန်ရော် ကျေးရွာနှင့် တာလ် ကျေးရွာအကြားတွင် ပိတ်မိနေတဲ့ စစ်ကားကိုးစီးအား CNA နှင့် CDF မှ ဝင်ရောက်တိုက် ခိုက်ရာ ငါးယောက်သေ၍ ဒဏ်ရာအများပြားရကာ စစ်ကားများအား ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ သည်ဟု ဆိုသည်။ စစ်ကောင်စီတပ်အတွက် ဟားခါးဘက်မှစစ်ကူများ မရောက် လာနိုင်စေရန် Mytel တာဝါတိုင်ကုန်းကို ပစ်ခတ်ကာ ချင်းတပ်များက စီမံထား ခဲ့သည်ကိုလည်း သိရသည်။
ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ပွဲတွင်တော့ စစ်ကောင်စီတပ်သား ခုနှစ်ဦးသေသည်ဟု ပြောသည်။စစ်ကောင်စီက အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားမှုကြောင့် ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲ ကြန့်ကြာမှုများလည်းဖြစ်နေသည်။mizzima
ချင်းမြို့တော် ဟားခါးသို့ ဦးတည်သည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်း အထိနာနေ
ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ မြို့တော် ဟားခါးသို့ အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် ထိုးတက်လာနေသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းမှာ ရှေ့မတိုးနိုင်ဘဲ ပိတ်မိနေသည်ဟု ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (CNF) နှင့် ချင်းဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (CDF) တာဝန်ရှိသူများက ဆိုသည်။
စစ်ကောင်စီသည် ချင်းပြည်နယ်ကို အကြီးအကျယ်ထိုးစစ်ဆင်ရန် အောက်တိုဘာလဆန်းပိုင်းမှ စတင်ကာ သံချပ်ကာယာဉ်များပါဝင်သည့် စစ်ကြောင်းများ ပို့လွှတ်နေသည်။ မကွေးတိုင်း ပခုက္ကူ-ပေါက်- ကျောက်ထုလမ်းပိုင်းမှတစ်ဆင့် ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း မင်းတပ်၊ မတူပီမြို့သို့လည်းကောင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေး-တမူးလမ်းမှတစ်ဆင့် ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ဖလမ်းမှ မြို့တော်ဟားခါးသို့လည်းကောင်း စစ်ကြောင်းနှစ်ခု ချီတက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
မြောက်ပိုင်းရှိ မြို့တော် ဟားခါးသို့ သွားရာလမ်းပေါ်ရှိ သံချပ်ကာယာဉ် ၂စီး၊ စစ်သုံးထရပ်ကား ၃၅ စီးကျော်ပါသည့် စစ်ကောင်စီယာဉ်တန်းကို ဖလမ်းမြို့မှ ထွက်ခွာလာပြီး ငါးရက်အကြာ အောက်တိုဘာ ၁၃ တွင် ထက်ဝက်ခန့် ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်နိုင်သည်ဟု CDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောသည်။
ဖလမ်းအကျော် တလန်ရောန်ရွာအနီးတွင် အောက်တိုဘာ ၁၆ က စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကို ကြားဖြတ်ဟန့်တား တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ စစ်တပ်ဘက်မှ ၄ ဦးထက်မနည်း သေဆုံးကာ ၁၅ ဦးခန့် ဒဏ်ရာရခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့ပြင် စစ်ကား ၇ စီးကို ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ နောက်တစ်ရက် (အောက်တိုဘာ ၁၇) တွင် ထိုနေရာမှ သုံးမိုင်ခန့်သာ ဝေးသည့် တားလ်ကျေးရွာအနီးတိုက်ပွဲတွင် စစ်သုံးယာဉ် ၉ စီးကို ထပ်မံဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ယာဉ်စီးရေ ထက်ဝက်ခန့် ပျက်စီးသွားသည့် အခြေအနေကြောင့် ကျန်ရှိ စစ်ယာဉ်တန်းမှာ ဟားခါးမြို့နှင့် ၂၈ မိုင်ခန့်သာ ဝေးတော့သည့် တားလ်ကျေးရွာအနီးတွင် ပိတ်မိနေပြီး ယနေ့ အောက်တိုဘာ ၁၈ နံနက်ပိုင်းအထိ ရှေ့မတိုးဘဲ ရပ်တန့်နေကြောင်း CDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဆိုသည်။
“တားလ်မှာပဲ တပ်စွဲထားတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ ရှေ့ကို တိုးလို့မရတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘက်က အကုန်လုံးပိတ်ထားတာ” ဟု ၎င်းက ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် Myanmar Now ကို ပြောသည်။
ဖလမ်း-ဟားခါးလမ်းတစ်လျှောက် ချီတက်လာသည့် စစ်ကြောင်းကို ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF နှင့် CNDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့က အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်မှ စတင်ကာ ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းမှာ ဖလမ်းမြို့မှ စတင်ထွက်ခွာလာသည့် အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်က ၁၀ မိုင်ခန့်အကွာရှိ အိမ်ခြေ ၁၀ လုံးကျော်သာရှိသည့် ရီလ်တီးလ်ရွာတွင် ဘုရားကျောင်းပါမချန် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သလို နောက်တစ်ရက်တွင် တလန်ရောန်ကျေးရွာရှိ နေအိမ် ၁၂ လုံးကိုလည်း မီးရှို့ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရသည့် ထိုစစ်ကြောင်းကို လမ်းကြောင်းရှင်းရန် မြို့တော် ဟားခါးဘက်မှ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အချို့က ကြိုးပမ်းသဖြင့် ဟားခါးအထွက်၌ပင် အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်က ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရကြောင်း၊ စစ်ကောင်စီဘက်မှ ငါးဦးသေဆုံးကြောင်း CNF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဆလိုင်းထက်နီက ပြောထားသည်။
ဖလမ်း – ရိဒ်၊ ဖလမ်း – ဟားခါး လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် စစ်ကောင်စီက ခရီးသွားပြည်သူများကို ဖမ်း၍ လူသားဒိုင်းသဖွယ် အကာအကွယ်ယူနေသဖြင့် သေရေး၊ ရှင်ရေးမှအပ ခရီးသွားလာခြင်းမပြုရန် ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်က အောက်တိုဘာ ၁၃ ကတည်းက ထုတ်ပြန်ထားသည်။’
ထို့ပြင် ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း မင်းတပ်မှ မတူပီဘက်သို့ အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်တွင် စတင်ထွက်ခွာနေသည့် သံချပ်ကာယာဉ် ၂ စီးအပါအဝင် ၆၄ စီးပါ စစ်ယာဉ်တန်းမှာ မင်းတပ်မြို့မှ မိုင် ၂၀ ကျော်အကွာသို့ ရောက်နေပြီဖြစ်သော်လည်း ရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့် ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း မင်းတပ်-CDF ထံမှ သိရသည်။
“မိုးတောက်လျှောက်သည်းနေတယ်။ မှိုင်းတွေ တိုက်နေတယ်။ အရမ်းအေး။ ဆိုတော့ ဘယ်လိုမှ ကိုယ့်ဘက်သူ့ဘက်ရော အခြေအနေမကောင်းဘူး။ ရာသီဥတုအရပေါ့။ ထိတွေ့မှုတော့ သိပ်မရှိဘူး” ဟု CDF (မင်းတပ်) ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောသည်။
စစ်ကောင်စီ၏ ထိုယာဉ်တန်းမှာ မိုင်းရှင်းလင်းရေးကို ဦးစားပေးနေပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း ရှေ့ဆက်နေသည့်အတွက် ထိခိုက်ပျက်စီးမှု မရှိသလောက်ဖြစ်နေကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
ထို့အတူ ထိုစစ်ကြောင်းအတွက် လမ်းကြောင်းရှင်းပေးရန် အင်အား ၇၀ နီးပါးဖြင့် အောက်တိုဘာ ၁၆ တွင် မတူပီဘက်မှ ထွက်လာသည့် စစ်ကြောင်းတစ်ခုမှာလည်း မင်းတပ်- မတူပီ နယ်နမိတ်အနီးသို့ပင် ရောက်နေပြီဟု မတူပီ – CDF ဘက်မှ သိရသည်။
ထိုစစ်ကြောင်းသည် လမ်းတစ်လျှောက်တွင် လက်နက်ကြီးဖြင့် တရစပ်ပစ်နေ၍ ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များဘက်မှ ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရန် ခက်ခဲနေသဖြင့် အခွင့်အခါကို စောင့်နေရကြောင်း CDF (မတူပီ) တာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။
“ဟိုဘက်(မင်းတပ်ဘက်က တက်လာတဲ့ စစ်ကြောင်း) ကလည်း ရိက္ခာတွေရော၊ လက်နက်တွေရော ပါလာတယ်။ ဒီဘက်(မတူပီဘက်မှ လာတဲ့စစ်ကြောင်း) ကလည်း လက်နက်တွေနဲ့ လက်နက်ကြီးတွေလည်း ပါတယ်ဆိုတော့ သူတို့တော့ အမြန်ဆုံးတွေ့နိုင်တယ်”ဟု ၎င်းက ခန့်မှန်းသည်။
မတူပီမြို့ပေါ်ရှိ စစ်တပ်ဗျူဟာကုန်းပေါ်မှတစ်ဆင့် လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် ယမန်နေ့ တစ်ရက်တည်းတွင်ပင် မြို့တောင်ဘက် ဝလံပီရွာအနီး တောင်ယာတဲတစ်ခုတွင် အသက် ခြောက်နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦး လက်နက်ကြီးထိမှန် သေဆုံးခဲ့သည်။
ထို့အတူ မတူပီမြို့အရှေ့ဘက်ရှိ ဟာသူးနှင့် ချင်းပြန်းကျေးရွာအတွင်း လက်နက်ကြီးကျည်အချို့ ကျရောက်ခဲ့၍ အနည်းဆုံး ဒေသခံတစ်ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း ထိုအဖွဲ့ကပင် ထုတ်ပြန်ထားသည်။
“သူတို့က အဝေးကနေပဲ ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ထင်တဲ့ တည်နေရာကို မှန်းပြီး ပစ်နေတာဗျ”ဟု CDF (မတူပီ) ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ယမန်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ပြောသည်။
မင်းတပ် -မတူပီ လမ်းမကြီးတစ်လျှောက် လမ်းပြုပြင်ရေးလုပ်နေသည့် ကုမ္ပဏီများအပါအဝင် စစ်ကောင်စီနှင့် ပေါင်းသည့် မည်သူ့ကိုမဆို အရေးယူမည်ဟု CDF (မတူပီ) က အောက်တိုဘာ ၁၅ ကတည်းက ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသည်။
စစ်ကောင်စီက သူ၏ တပ်များကို ချင်းပြည်နယ်သို့ အင်အားအလုံးအရင်း ပို့လွှတ်နေခြင်းမှာ CDF ခြေကုပ်စခန်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ ဌာနချုပ်ကို တိုက်ခိုက်ရန် ဖြစ်နိုင်သည်ဟု CNF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဆလိုင်းထက်နီက ခန့်မှန်းထားသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသည်ကိုပင် အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းသည့် စစ်ကောင်စီကို ရိုးရာတူမီးသေနတ်ဖြင့် ဦးဆုံးခုခံသည့် ဒေသများတွင် ပါဝင်သော ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ဒေသခံ ပြည်သူတို့မှာ မြို့များကိုပါ စွန့်ခွာ၍ စစ်ဘေးရှောင်နေရသည်အထိ စစ်ရေးအရှိန်မြင့်တက်နေသည်။
သို့သော် ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲများတွင် လက်နက်အင်အားမမျှသည့် အခြေအနေကြောင့် စစ်တပ်၏ စစ်ရေးရည်မှန်းချက်များကို ကြားဖြတ်ဟန့်တားခြင်း၊ စစ်ကောင်စီ၏ ယန္တရားကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းများတွင် အခက်အခဲများစွာ ကြုံနေရသည်ဟု ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များက ပြောထားသည်။
လက်ရှိတွင် ချင်းပြည်နယ်မြို့တော် ဟားခါးမှလွဲ၍ ကျန်မြို့နယ်အားလုံးတွင် စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်မှ စကာ စစ်ကောင်စီက အင်တာနက်လိုင်းများ ဖြတ်တောက်ထားပြီး စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများတိုးမြှင့်နေပြီ ဖြစ်သည်။
“တိုက်ပွဲက ကြီးလာဖို့ရှိတယ်။ ……. အဓိကက ဒေသခံပြည်သူတွေက ကိုယ့်လုံခြုံရေးကို အတတ်နိုင်ဆုံးယူကြဖို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ ဒေသခံပြည်သူလူထုကို ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဆလိုင်းထက်နီက ပြောသည်။
လှည်းနေ၊ လှေအောင်း၊ မြင်းဇောင်းမကျန် ပါဝင်မည့် ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးစပြီဟု စက်တင်ဘာ ၇ တွင် ကြေညာထားသည့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG) က နိုင်ငံအနှံ့ ရရာလက်နက်ဖြင့် တော်လှန်နေကြသည့် ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များနှင့် မည်သို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည်၊ ထောက်ပံ့နေသည်တို့ကိုမူ ယနေ့တိုင် ရှင်းလင်းစွာ မသိရသေးပေ။myanmar now
ဆားလင်းကြီးတွင် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ ဖက်ဆစ် စစ်တပ် တော်လှန်ရေး သံပုံးတီး ညသပိတ်ပြုလုပ်
ပဲခူးတိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်ရင် သာ ယာဝတီအကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လည်လွတ် မြောက်လာ
အာဏာသိမ်းတပ်က ဖမ်းဆီးခဲ့သော ရွေးကောက်ခံအစိုးရ၏ ပဲခူးတိုင်း ဒေသ ကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးခင်မောင်ရင်သည် ယနေ့ အောက်တို ဘာ ၁၈ ရက် နေ့တွင် သာယာဝတီအကျဉ်းထောင်မှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။ဖေဖော်ဝါရီ၁ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်အာဏာစသိမ်းသည့်နေ့တွင်ပင် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်ရင်အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။သာယာဝတီအကျဉ်းထောင်မှ မင်းလှမြို့နယ် အခြေစိုက် DVB သတင်း ထောက် ကိုသက်နိုင်ဝင်းလည်း လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။mizzima
မန္တလေးသပိတ်စစ်ကြောင်း ကားဖြင့်တိုက် ဖြိုခွင်းခံရ၊ ၁၀ ဦးထက်မနည်း အဖမ်းခံရ
မန္တလေးမြို့ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ၆၉လမ်း၊ ၃၇လမ်းနှင့် ၃၈ လမ်းကြား မဟာမြိုင်ရပ်ကွက်တွင် ယနေ့(အောက်တိုဘာ၁၈) နံနက် ၈ နာရီခန့်က ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေသည့် လူငယ်များကို စစ်ကောင်စီက ကားဖြင့် တိုက်ဖြိုခွင်းကာ ၁၀ ဦးထက်မနည်း ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသည်ဟု သိရသည်။
လူငယ် ၆၀ ခန့် စုဝေး၍ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြနေစဉ် ကားဖြင့် စဝင်တိုက်ပြီးနောက် အိမ်စီးကား၊ ရဲကားများ ရုတ်တရက်ရောက် လာသည့် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် ၅၀ ကျော်ခန့်က သေနတ်များပစ်ဖောက်ကာ ပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ကြောင်း မျက်မြင်တွေ့ရှိသူက ပြော သည်။
“ကလေးတွေကို ကားနဲ့တိုက်ပြီး ရိုက်နှက်ပြီး ကားပေါ်တင်တယ်။ ဖမ်းခံရတာ များတယ်။ ဒဏ်ရာရသူတွေလည်း အတော်များနိုင်တယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ဖမ်းဆီးခံရသူ၊ ဒဏ်ရာရသူနှင့် ဖြိုခွင်းစဉ် စစ်ကောင်စီက အသုံးပြုခဲ့သည့် မော်တော်ယာဉ်အရေအတွက် စသည့် အချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုမူ ၎င်းက အတည်မပြုနိုင်ပေ။
ဆန္ဒပြမှုတွင် ပါဝင်သည့် သပိတ်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၏ အဆိုအရ ဆန္ဒပြမှု စတင်ချိန်တွင်ပင် ဖြိုခွင်းခံခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ကြွေးကြော်သံ စစတိုင်ချင်း သုံးခွန်းမြောက်မှာ ရပ်ထားတဲ့ကားတွေက ပြေးလာတိုက်တာ။ သေနတ်တွေ တစရပ်ပစ်တယ်။ လှည့်ပြေးတဲ့သူတွေကိုလည်း ညှပ်ပိတ်ထားတယ်။ …. တချို့အိမ်တွေက တံခါးဖွင့်မပေးရဲကြဘူး။ ကျွန်တော်တို့ …… ပြေးတဲ့နေရာမှာ လမ်းကြားအထိ ကားနဲ့ လိုက်တိုက်တာ နှစ်ဦးပါသွားတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုလည်း သေနတ်နဲ့ လှမ်းပစ်သေးတာ”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
သပိတ်စစ်ကြောင်း ထိုသို့ဖြိုခွင်းခံရပြီးနောက်တွင် စစ်ကောင်စီက မဟာမြိုင်ရပ်ကွက်ကို အင်အားအများအပြားဖြင့် ပိတ်ဆို့ထားပြီး ရှာဖွေစစ် ဆေးမှုများလုပ်နေကြောင်း၊ ဖမ်းခံထားရသည့် လူငယ်များ၏ လက်ကိုင်ဖုန်းကို သုံး၍ အခြားသူများကို ဖမ်းဆီးနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြောင်း ဒေ သခံနှင့် ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပြသူတို့က ပြောသည်။
သို့သော် ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ကောင်စီထံ မေးမြန်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁ အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ဆန့်ကျင်ကြောင်း နေ့စဉ်မပြတ်ဆန္ဒပြနေသည့် မန္တလေးတွင် စစ်ကောင်စီကလည်း သံဃာများကိုပင်မချန် အညှာအတာမဲ့ နှိမ်နင်းနေသည်။
အောက်တိုဘာ ၂ ရက်ကပင် မန္တလေးသံဃသမဂ္ဂစစ်ကြောင်းကို ကားဖြင့် တိုက်၍ ဖြိုခွင်းခဲ့ပြီး သံဃာငါးပါးကို စစ်ကောင်စီက ဖမ်းသွားခဲ့သေးသည်။
“ကျွန်တော်တို့ အသက်နဲ့ရင်းပြီး တော်လှန်နေတာက ကြောက်လို့လန့်လို့ ရပ်တန့်လိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့သေသေကြေကြေ ဆက်တော် လှန်သွားမှာ”ဟု အထက်ပါ သပိတ်ခေါင်းဆောင်က ပြောသည်။myanmar now
စစ်ကောင်စီတပ်တွင်း တိုင်းရင်းသားရဲဘော်များ ထွက်မပြေးပါဟု အာမခံ လက်မှတ်ရေး ထိုးခိုင်းဟုဆို
အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတပ်များအတွင်း ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားရဲဘော်များအနေဖြင့် တပ်မှထွက်မပြေးပါဟု အာ မခံ လက်မှတ် ရေးထိုးခိုင်းစေကြောင်း ပြည်သူ့ဘက်သို့ကူးပြောင်းလာသော CDM တပ်ကြပ်ကြီးဟင်လျန်ပြန်းက ပြောသည်။”တပ်ထဲမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေဖလမ်း၊ ဟားခါး၊ တီးတိန်းတို့မှာ တာဝန် ကျနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားချင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ နည်းလမ်းဘယ်လိုစတင်လာ လဲဆိုရင် တိုင်းရင်းသားတွေကို တပ်ထဲကနေထွက်မပြေးပါဘူးဆိုပြီး လက်မှတ်တွေထိုးခိုင်းလာပါတယ် ”ဟု တပ်ကြပ်ကြီးဟင်လျန်ပြန်းက ပြော သည်။
ထို့အပြင် စစ်ကောင်စီတပ်တွင်း စိတ်ဖိစီးမှုများကာ မိမိကိုယ်ကိုယ် သတ်သေ သည့်ရဲဘော်များရှိလာသည်ဟုဆိုသည်။”မြေပြင်တပ်တွင်းမှာ သတင်းမှန်တွေကိုဖုံးအုပ်ထားတော့ သတင်းမှန်တွေကို တပ်ထဲက ရဲဘော်တွေမသိဘူး၊အခုဆိုရင် တပ်ထဲမှာ အင်အားမရှိတော့ ၂၄ နာရီအချိန် ပြည့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတယ်။ ပင်ပမ်းတယ်၊ ဆင်းရဲတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုများပြီး အခုဟားခါးမှာဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေတာ သုံးယောက် ရှိနေပြီ၊”ဟု ဟင်လျန်ပြန်းကပြောသည်။
တပ်ကြပ်ကြီးဟင်လျန်ပြန်းသည် အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ဒုတိုင်းမှူး ၏လက်ထောက်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဟားခါးတွင်အမှုထမ်းခဲ့ကာ အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီလက်အောက်တွင် အမှုမထမ်းလို၍ ဘက်ပြောင်းခိုလှုံခဲ့သူဖြစ်သည်။တပ်ကြပ်ကြီး ဟင်လျန်ပြန်းက CDM လုပ်လာသည့်အတွက် အောက်တိုလာ ၁၁ရက်နေ့က ၎င်း၏အသက် ၆၀ ကျော်အရွယ်မိခင်၊ မသန်စွမ်းညီမ နှစ်ယောက်၊ ၁ဝနှစ်အရွယ်တူမနှင့်တက္က သိုလ်ကျောင်းသူ တူမတစ်ယောက်ကို စစ်ကောင်စီ တပ်များက ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။mizzima
ရန်ကုန် အင်းစိန်တွင် “တော်လှန်သီတင်းကျွတ်မီးတောက်တွေနဲ့ အာဏာရှင်ကိုလောင်ကျွမ်းစေ” ဖက်ဆစ် စစ်ကောင်စီ ချေမှုန်းရေး တော်လှန်လူငယ်များ ညသပိတ် ချီတက် ဆန္ဒပြ
အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်၌ အကျဉ်းကျခံရသူ များ ယနေ့ညတွင် စတင်လွတ်မြောက်လာ
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက ဖမ်းဆီးပြီး ရန်ကုန်အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်တွင်ချုပ်နှောင်ထားသော အကျဉ်းသားအချို့ ယနေ့ည ၆ နာရီခန့်မှစ၍ လွတ်မြောက်လာသည်။
“ဒီနေ့ အယောက် ၆၀၀ လောက်လွှတ်မယ်လို့အထဲမှာကြားခဲ့တယ်။ အမျိုးသမီး အယောက် ၅၀ ကျော်ပါမယ်။ ညီမကတော့ သုံး နှစ် အမိန့်ချခံရပြီး လွတ်လာတာပါ။ ဖမ်းခံရတာ ရှစ်လ ပိုင်းကပါ။ ဒီနေ့သတင်းကြည့်မိမှ ပြန်လွှတ်ပေးမယ်ဆိုတာသိရတာ။ အစက ကိုယ်ပါမယ်မပါဘူးမသိရသေးဘူး။ အခုတော့ လွတ်လာပါပြီ” ဟု ပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့များကို ထောက်ပံ့ကူညီမှုဖြင့် နေအိမ်၌ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်နေ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောသည်။
အကျဉ်းကျခံနေရသူ ၁,၃၁၆ ဦးနှင့် တရားစွဲဆိုခံထားရသူ ၄,၃၂၀ ဦးကို လွှတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း စစ်ကောင်စီက ကြေညာထားခဲ့သည်။mizzima
ချင်းတောင်ပေါ်တွင် စစ်ကောင်စီတပ်ကား၉ စီး ဖျက်စီးခံရ
ချင်းပြည်နယ် ဟားခါးမြို့နှင့် ဖလမ်းမြို့ကြား စစ်ကောင်စီတပ်ကားကိုးစီးကို ယမန်နေ့ညက ဗုံးခွဲဖျက်စီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ချင်းတော်လှန်ရေးတပ်မဟာမိတ် ကပြောသည်။တာလ်ကျေးရွာအနီး တွင် စခန်းချနေသည့် စစ်ကောင်စီတပ်ကားများကို ယမန်နေ့ (အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်) ညက ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (CNF) ၊ ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (CNDF) ၊ ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေး အင်အားစုအဖွဲ့ (CDF) ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့က ဗုံးခွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။
”ကျွန်တော်တို့လက်လုပ်မိုင်းနဲ့ထောင်ခွဲတာ စစ်ကား ကိုးစီးပျက်စီးပြီး အရာရှိအပါအဝင်စစ်သားတော်တော်များများသေဆုံးတယ်ဆိုတာကိုတော့ အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။ ရာသီဉတုကလည်းမြူတွေဆိုင်းနေတယ်။ ဖုန်းလိုင်းတွေလည်းအဆင်မပြေတော့ အသေးစိတ်ကိုနောက်မှထုတ်ပြန်ပါ မယ်”ဟု ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ကလည်း ဖလမ်းနှင့် ဟားခါးကြားတွင် စစ်ကောင်စီကား ခုနှစ်စီးကို CNF၊ CNDF နှင့် CDFပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့က တိုက်ခိုက်ဖျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ mizzima